Fanadihadiana miaraka amin’i Gaël Brassac, Mpandika Teny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Natasha D'Souza
Voadika ny 16 Avrily 2011 5:52 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, Español, 繁體中文, 简体中文, Aymara, македонски, Français
Tohizanay ny famoahana ny mombamomban’ ny Mpandray anjara Global Voices amin'ny teny malagasy, izay mpandray anjara mavitrika manome fahafaham-po ho an'ireo mpamaky ny lahatsoratra bilaogy amin'ny fiteny maro samihafa.
Ny fitiavana firenena manokana matetika no antony iray mahatonga ny mpamaky lasa mpandray anjara ato amin'ny Global Voices. Japana no tena mahaliana an'i Gaël ankehitriny, fa noho ny fitiavany an'i Bangladesh no nahitany voalohany ny Clobal Voices.
Hita eto ireo mombamomba ny bilaogera sy mpandika teny manerantany ao amin'ny Global Voices .
Mpandika teny Global Voices Gaël Brassac taoKyoto, ny volana Aprily 2010.
Mpamaky matetika ny Global Voices ve ianao nialoha ny naha-mpandika teny amin'ny teny frantsay anao?
Gael Brassac: Tamin'ny fiandohan'ny taona 2009 tany amin'ny oniversité no nahitako ny Global Voices , raha nanao fikarohana momba ny fitantanana ny “géopolitique” mikasika ny ady anatiny ao amin'ny firenena Aziatika, naheno aho fa misy fiokoana eo anivon'ny miaramila Bangladesh. Vitsy ireo loharanom-baovao amin'ny gazety, saingy tao amin'ny Global Voices, nahita lahatsoratra mahaliana nataon'ny mpiara-miasa Rezwan, izay nanampy ahy betsaka! Nanomboka nandika teny tsikelikely aho ary manampy ihany koa amin'ny famoahana lahatsoratra.
Inona no lahatsoratra ao amin'ny Global Voices izay nadikanao ka nanohina mafy anao?
GB : Iray amin'ireo efa nadikako voalohany dia ny momba ny Egypta tamin'ny volana jona2010: Khaled no anarako ary tsy mpampihorohoro aho. Nohazavaina tao ny antony namonoana an'ity tanora Egyptiana ity izay nanana ny horonantsary manala baraka an'ireo polisy tao an-toerana, ka ireo polisy ireo ihany no namono azy. Mampiseho ny kolikoly amin'ny ankapobeny ao amin'ny firenena Ejypsiana ny lahatsoratra, hatramin'ireo manamboninahitra faratampony. Tsy ampy herintaona taty aoriana, niova ny toe-javatra, ary mbola tsy nanadino an'i Khaled ireo mpanao fihetsiketsehana teo amin'ny kianja Tahrir ka nanangasanga ny endriny tamin'ny fotoanan'ny revolisiona ejypsiana tsara indrindra toy ny ratsy indrindra.
Mipetraka ao Drôme, ao France ianao, kanefa i Japana no tena mahaliana anao indrindra amin'izao fotoana izao. Fa nahoana no Japana?
GB: An'ny fandaharana TV Club Dorothée sy ny fandaharana manga Japoney ny fahadisoana, fony izaho mbola zazakely! Amin'izao fahatanorana izao, nanomboka namaky ny tohin'ny manga voalohany aho toy ny Jojo's Bizarre Adventure, GTO, sy ny Rurouni Kenshin, sy ny rehetra. Mikasika ny literatiora, namaky ny Murakami Ryu, Haruki Murakami, Osamu Dazai, sy ny Ryosuke Akutagawa manokana aho. Te-hianatra ny fomba fiteniny aho ary te-hipetraka ao amin'io firenena io (Japana). Tamin'ny voalohany, nianatra teny Anglisy sy Japoney aho mba hanao asa fitadiavam-bola ao Frantsa sy Japana, saingy momba ny haivarotra “marketing” sy ny paikady “stratégie” no tena mety kokoa tamiko. Naniry ny hifantoka bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa misy firaisan-kina sy ny maha-olona no tena nahavariana ahy tanteraka, fa tsy ny fitadiavam-bola. Taorian'ny taona iray nipetrahako tao Japana, nampianatra ny momba ny fitantanana aho ary namorona tetikasa maha-olona tao amin'ny oniversité Aix-en-Provence, ao Frantsa, ary tao no nahitako ny sakaizako Zainichi, olom-pirenena Koreana teraka tao Japana. Ankehitriny, mitady asa momba ny maha-olona ao Frantsa aho, any Japana na any an-kafa. Saingy rehefa antitra aho, dia mino aho fa hiverina hipetraka ao Japana.
Ahoana ny fomba iainanao ny toe-javatra ankehitriny ao Frantsa?
GB : Ny herinandro taorian'ny horohorontany, ny tsunami sy ny fahaverezan'ny taratra radioactive, valalanina tanteraka aho. Manohy mijery ny vaovao hatrany aho saingy nampihemotra ahy ny hamaroan'ny fampahalalam-baovao tsy mitovy ankehitriny, ka nisafidy loharanom-baovao iray aho, ny sehatra fiadian-kevitra, mba tsy ho sorena intsony. Rehefa mipoitra ao amin'ny firenena iray izay nananana fahatsiarovana tsara be, toy ny sakaiza, ny namana, izay antenaina fa mbola hiaina hatrany, dia sarotra ny hizaka izany. Kanefa mino aho fa mbola ho tafarina i Japana tahaka ny nahafahany niarina taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Inoako fa hampihatra ny politika mampandroso izy mikasika ny angovo maharitra ary handray fanapaha-kevitra hentitra tsara tahaka ny efa nataony raha nanoratra ny lahatsarotra faha-9 ao amin'ny Lalampanorenana Japoney tamin'ny taona 1946, amin'ny tsy hidirana amin'ny resaka ady.
Miarahaba an’ny Mpanoratra sy ny Mpamaky rehetra . Tsara tokoa ny fahitako ny tari-kevitra eto amin’ity sehatra ity satria mitarika lafin-kevitra vaovao hampitomboana ny Mpiteny ny fiteny malagasy.Izao no hevitro: tsy tokony hijanona amin’ny fiteny malagasy enti-manoratra sy enti-miteny araka ny fijerin’ny fanjakana sy ny olona akaiky azy ihany no atao fiteny ,fa tokony ireny teny hifanaovan’ny olona tsotra ireny toy ny mpamboly, mpivarotra , mpiasa ho azy ,mpiompy ary ny hafa ihany koa.Satria ieny olona ireny no tena manaparitaka ny fiteny sy ny fomba fiteny ary mitarika ny faharetany eo amin’ny taranaka mandimby rehetra.Misaotra namaky ny hevitro .Misaotra indrindra .
16 Avrily 2011, 16:37
Mankasitraka indrindra tamin’ny fanoratanao fa na dia izay aza dia efa manome hery lehibe ho anay hoe misy mamaky tokoa ny zavatra voasoratra! manaraka izany dia azo heverina sy eritreretina tsara ny zavatra soratanao. Misy anefa ny fitsipipitenenana tokony hotandrovina mandrakariva mba ho voahaja ny fanoratra malagasy. Misy ihany manko indraindray mety hahasadaikatra ny mpamaky hafa toy ny fiteny hoe “amin’ilay oui” ohatra izay lasa mampiditra tarehintsoratra tsy anaty alfabeta malagasy. Iray hafa koa ohatra ny fiteny hoe “Mahintsiny” tahaka ny hoe tsy tiako mahintsiny ny ataon-dRabe. Be mpiteny io voambolana iray io saingy diso ara-pitsipipitenenana fa rehefa misy manko ny “mahitsy” dia tokony hisy koa izany ny “mivilana”. Fa na izany na tsy izany rehefa misy voambolana mety ara-pitsipipitenenana tsy tokony hisy olana loatra ny mampiasa azy rehefa fantatry ny besinimaro ny dikany. Mankasitraka indrindra, tompoko, tamin’ny fametrahanao ny hevitra ary mirary indrindra ny mbola hitozoanao ho amin’izany sy hitarika ny hafa ihany koa hamaky ity sehatra hanarahana ny vaovao avy amin’olo-tsotra ity…
17 Avrily 2011, 19:42